Livestreams Archive - Kodzero dzevanhu & Chiedza Art na ∴ PixelHELPER Foundation
Livestream swarm kubatsira software kukura
Kubuda mumvura kunobatsira. Software yekuronga zviito pazviitiko zvevanhu
Nekuiswa kwaPixelHELPER Livestream Schwarmhilfe software pane imwe nzvimbo muNorth Africa, takagadzira chokwadi chekutongwa kwemunda weprojekti yedu. Isu tinogona kushanda zvino pamatambudziko eAfrica yeAfrica neyokubatsira kwedu software. Isu takagadzira nzvimbo dzakasiyana-siyana dzekushanda pamwe chete pamusangano wedu wekushandira pamwe. Dhipatimendi rekutsvaga, nzvimbo yekusimudzira, bhakabhi, kushambadzira kwemahara, 3 makiromita emakanda ematare ebatanidza 20 makamera pamwe kuratidza vatariri vedu nguva dzose mifananidzo yechangobva kugadzirwa.
15 mita hydraulic kamera mast kumashure ne360 degree kamera musoro & WiFi
Kufamba kwekufambisa kwakaoma zvikuru, zvishoma kudhura asi zvinotengesa chete
23.06.18 soup kitchen yakasvika kuMorocco
Takafambisa Progress yedu soup kicheni kuvanhu vane 600 vane nzara kuMorocco. Ikicheni iri mumitambo yevhiki mbiri uye isu tichiri kutotanga, iyo inodhura inenge inenge ye400 €. Ngoro yerineni ine zvishandiso zveMweya wedu weSululina inenge iri kuMarrakech. Isu tiri kutsvaga purazi kuti tivake Spirulina Farm. Pamusana pemari yakaderera yezvikamu zvemayano emadhora e2500 mugore re2017, tinogona kuwedzera zvishoma nezvishoma mubasa racho. Tinotarisira rendi ye-600-1200 € zvichienderana nenzvimbo yepurazi. Sezvo tichida inotsvaga 4G yeInternet purazi, tinofanirwa kuedza kukurumidza kuenda kune imwe nzvimbo, sezvo tichamhanya tichishandisa 20 mukati memakamera IP, uyewo kutumira miviri miviri yekunze kune Facebook neTwitch.
Chinhu chikuru chakanakira ndechekuti kune mashoma mapurazi asina kudyarwa nemiti yemiorivhi kumusoro, asi ane nzvimbo yakavhurika ine magetsi nemvura.
Takatotarisa pamapurazi e10 uye chete iyo yakakodzerwa yaiva yekutengeswa kwe80.000 € yakapiwa uye kwete yekubhadhara.
18.06.18 Customs zvichiri kubata kicheni, matangi ari nyore kutengesa
Iye zvino manhamba & mari
Iye zvino tave tatoisa mari pamusoro pe25.000 € mumatombo eWirulina Farm uye 25.000 € mune zvokushandisa zvekushandisa, motokari kutenga uye kuunza zvigadzirwa zvedu kuNorth Africa.
Tinoda rubatsiro rwenyu nokukurumidza sezvinobvira kutumira nguva ye24 yevestream kubva kuMorocco. Pangosvika iyo Spirulina Farm iri kushanda, tichatyaira svikisi yedu neTender tarekta ku Senegal. Hatifaniri kuwana chibvumirano chekugara kweMorocco tichamhanyisa tichienda kumaodzanyemba kuenda kuMauritania, Senegal neGambia uye edza ikoko
kuwana nzvimbo uye Daueraufenthalsememigung. Sezviri pachena, zviri nyore kutengesa matanki kuAfrica kupfuura zvigadziro zvevanhu.
Chigadzirwa chemagetsi chekushandisa simba remafaira emabhuku ekugara kwedu
360 makamera emakera pamushamba webunhare. Kutengesa Wi-Fi kumotokari kushandiswa kwekunze kunze
11.05.18/XNUMX/XNUMX Defender & Caravan kuchengetedza mitengo yakaderera sezvinobvira mu Africa
Muenzaniso wekugadzirwa kwepurogiramu neWirulina kuitira kuti usagadzika mabhedheni emakona
Kubatana kwevanhu semukana wekubatana mukati memazuva ano, chengetedza kuparadzirwa kuburikidza nemazwi e Facebook. Zombies haazive marudzi, ruvara kana chitendero. Izvo Zombies iri kunze kweMiganhu yakazviona seyanobatanidzwa inobatsira mapuratifomu. Zita racho ndiro rinobva kune zombie makombiyuta anotarirwa kunze. Kuda kwedu hakusi chinhu chiduku kunze kwekugadzirisa matambudziko ose evanhu kuburikidza nekubatsira pakati pevamwe vataridzi kuburikidza neivestream. Chinangwa chedu: Maawa e24 ekugara aripo kubva mumatombo enyika. Achiperekedzwa venhau mu munyika dzine hondo, rubatsiro kuparadzirwa mumisasa yevapoteri kana anovhima kwemutemo muna Kruger National Park, yaaizova remhashu yedu kuzvidzora mupamhi Our chishandiso: The manzwiro mifananidzo Facebook kudzora ebetsero remhashu uye kusarudza zvinoitwa.
Izvo zvinangwa zveZombies pasina Mitsararo zvino munzvimbo dzakawanda, uchishandisa teknolojia yakagadziridzwa, kusanganisira moteri yebheteri yekutakura nguo; nokuti RTMP Facebook kurarama rukova kudzora zvemukati Wireless kamera chidhiraivho, vatambi Database Software nokuda mukuze kuzvidzora, wedzera-Ons mapoka makuru evanhu kuti zvakanaka zvinangwa nomukombiyuta Browser kuitira kugadzirisa mikuru zvinetso nguva.
Yekutanga mhenyu nzizi nzvimbo dziri Senegal, Palestine uye yedu logistic Europe hub muMorocco. Pixel Munyaradzi anoda kugovera dzimwe nyika dzese nerubatsiro kubva kune kwarwo kuMorocco. Tiri munzira kuenda kuMadagascar, tinoda kumisikidza imwechete yekufambidzana nzvimbo munzvimbo dzese. Nzvimbo dzinotenderera dzinofanirwa kumisikidza mikana yemabasa senge algae purazi & gadzira zvigadzirwa pamwe nevapoteri kuti vakupe ramangwana rakanaka kukondinendi ye Africa. Zvese zviri mukati mekurarama, iwe uripo nguva dzose uye sarudza zvinoitika. Nzvimbo yega yega inoratidzwa murukova chairwo mukati mezuva, inopindirana terevhizheni nechinangwa chekuvandudza nyika kuburikidza nerubatsiro rwechikwata. MuMadagascar tinoda kushandisa iyo yechiGeorgia phage therapy panzvimbo ino kuchengetedza vanhu kubva padenda remapapu rinobuda ipapo gore rega rega. Kubudikidza nechinamato chevakafa, vagari vepachitsuwa ichi vanosangana nehutachiona hwakauraya mamirioni avanhu muEurope muMiddle Ages.
Interactive real-time rubatsiro mumavhidhiyo mavhidhiyo ari mu browser yako.
Nehunyanzvi zvinoshanda kuitira kuti titange rukova ruri neyakajeka zvinhu zvekutonga uye tobva takoka avo "maZombies asina miganhu" vashandi mune yedu yekuyerera rukova. Nenzira iyi, isu tinoramba tichitarisa tarisiro yezvinhu zvekudyidzana zvinoshanda uye nekukurumidza kuita shanduko murukova rwizi panzvimbo yedambudziko.
2014-2015 takatora ruzivo rwekutanga nehuwandu hwemvura inobatsira
Mufananidzo Copyright: https://web.facebook.com/patryk.witt
Livestream swarm kubatsira software kukura February 3rd, 2019Oliver Bienkowski